Ithegi: i-imeyile ebangela | Martech Zone
Ithegi: i-imeyile ebangela
Ngokusebenza nabathengisi be-imeyile abaliqela, bendihlala ndimangalisiwe kukusilela kokuyilwa kwangaphambili, okusebenzayo okukhokelela kwimikhankaso ye-imeyile ngaphakathi kweeakhawunti xa kusenziwa. Ukuba uliqonga lokufunda oku-kuya kufuneka ukuba ube namaphulo alungele ukuya kwinkqubo yakho. Ukuba ungumthengisi we-imeyile, kuya kufuneka ukuba usebenze ukubandakanya iintlobo ezininzi zee-imeyile ezinokubangela ukuba wandise ukubandakanyeka, ukufunyanwa, ukugcinwa kunye namathuba e-upsell. Abathengisi abangasebenzisi i-imeyile ebangelwe
Isebe lezoRhwebo lase-US linike ingxelo yokuba intengiso ekwi-intanethi ibalwe ngaphezulu kwesithathu sokukhula kwentengiso yentengiso ngo-2015. Uphando lukwabonisa ukuba ukuthengisa kwi-Intanethi kwabalelwa iipesenti ezisi-7.3 zentengiso zizonke ngo-2015, ukusuka kuma-6.4 eepesenti ngo-2014. linoxanduva lokufumana ngaphezulu kweepesenti ezisixhenxe zayo yonke intengiselwano ye-e-commerce, eyenza ukuba ibe sesona sixhobo sokuthengisa sentengiso se-ecommerce esisemva komsebenzi wokukhangela kwi-Intanethi, oqhayisayo
Ukuthengiswa kwe-imeyile ngokuzenzekelayo kunye nokusebenza kwayo
Usenokuba uqaphele ukuba sinenkqubo ye-drip kwintengiso engenayo onokuthi ubhalise kwindawo yethu (jonga isilayidi esiluhlaza kwifom). Iziphumo zeli phulo lokuthengisa ngokuzenzekelayo nge-imeyile ziyamangalisa - ngaphezulu kwababhalisi abangama-3,000 babhalise kakhulu, bambalwa kakhulu abangabhalisanga. Kwaye asikaze siguqule ii-imeyile zibe yi-imeyile entle ye-HTML okwangoku (kuluhlu lwezinto ekufuneka zenziwe). I-imeyile ezenzekelayo ngokuqinisekileyo